Our History – Baby Expert Myanmar
ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ
Baby Expert Myanmar
One Lion King Trading Co.,Ltd
Our Future Plan
Category: Our History
babyexpert	 24th January 2019 No Comments
ကျွန်တော်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် One Lion King Trading Co.,Ltd ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းဦးရေး (20) ကျော်ဖြင့် လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအချိန်တွင် တရုတ်ပြည်မှ သွင်းကုန်အနေဖြင့် လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမျိုးစုံ ၊ ဓာတ်ခဲ မျိုးစုံ ၊ ခြင်ဆေးဘူး၊ ခြင်ဆေးခွေ၊ ပါကင်တိတ်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ သွားတိုက်တံ၊ ကော်ဘရတ်မျိုးစုံ ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ သွားကြားထိုးတံ၊ တခြားလူသုံးကုန် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ၊ စာရေးကိရိယာ အမျိုးမျိုးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့ ပြီး ထုတ်ကုန်အနေဖြင့် ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကွမ်းသီး၊ ငါးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း နိုင်ငံတကာသို့ export လုပ်လျက်ရှိသည်။
ယခု ထပ်မံ၍ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့သော အနေဖြင့် 2017 မှဘစတင်၍ Baby Expert ကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ယူပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချလျှက်ရှိရာ အချို့သော မြို့များတွင် ကိုယ်စားလှယ် ထားရှိ၍လည်းကောင်း တချို့သောမြို့များသို့ Marketing ကားများဖြင့် လည်းကောင်း ဝန်ထမ်းဦးရေ (150) ခန့်ဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
ကြှနျတျောသညျ ၂၀၁၀ ခုနှဈတှငျ One Lion King Trading Co.,Ltd ကို စတငျ တညျထောငျခဲ့ပွီး ဝနျထမျးဦးရေး (20) ကြျောဖွငျ့ လညျပတျခဲ့ပါသညျ။ ၄ငျးအခြိနျတှငျ တရုတျပွညျမှ သှငျးကုနျအနဖွေငျ့ လကျနှိပျဓာတျမီးမြိုးစုံ ၊ ဓာတျခဲ မြိုးစုံ ၊ ခွငျဆေးဘူး၊ ခွငျဆေးခှေ၊ ပါကငျတိတျ၊ သှားတိုကျဆေး၊ သှားတိုကျတံ၊ ကျောဘရတျမြိုးစုံ ၊ ဆပျပွာမှုနျ့၊ သှားကွားထိုးတံ၊ တခွားလူသုံးကုနျ ပစ်စညျးအမြိုးမြိုး နှငျ့ အလှကုနျပစ်စညျး အမြိုးမြိုး ၊ စာရေးကိရိယာ အမြိုးမြိုးကို ဖွနျ့ဖွူးရောငျးခခြဲ့ ပွီး ထုတျကုနျအနဖွေငျ့ ပဲအမြိုးမြိုး၊ ကှမျးသီး၊ ငါးအမြိုးမြိုးတို့ကိုလညျး နိုငျငံတကာသို့ export လုပျလကျြရှိသညျ။
ယခု ထပျမံ၍ လုပျငနျးတိုးခြဲ့သော အနဖွေငျ့ 2017 မှဘစတငျ၍ Baby Expert ကို မွနျမာနိုငျငံ တဈဦးတညျး ကိုယျစားလှယျယူပွီး မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးသို့ ဖွနျ့ဖွူး ရောငျးခလြှကျရှိရာ အခြို့သော မွို့မြားတှငျ ကိုယျစားလှယျ ထားရှိ၍လညျးကောငျး တခြို့သောမွို့မြားသို့ Marketing ကားမြားဖွငျ့ လညျးကောငျး ဝနျထမျးဦးရေ (150) ခနျ့ဖွငျ့ဖွနျ့ဖွူးရောငျးခလြှကျရှိပါသညျ။
I established One Lion King Trading Co., Ltd in 2010 and have carried out my work withawork force of 20 company staff. During that time, different kind of imports from China – flashlights, dry all battery, mosquito repllents and coil, tapes, tooth pastes and toothbrushes, different brushes, soup powder, tookpicks and other kinds of consumer and cosmetic and different kinds of stationary were bought and distributed throughout the country. At the same time, export of beans and betel nuts and different kinds of fishes were exported.
As an extention of many work, the product of Baby Expert imported to our country as since 2017, by appointing agents in some towns and most towns distributed by marketing vehicles withaworkforce of 150 staff.
My Oh My Myanmar
Phone : 095413236
Email : kokhinzaw@babyexpertmyanmar.com
Address : No.94(B), Kan Taung Qtr, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon, Myanmar.
Copyright © 2018 | All Rights Reserved by Baby Expert Myanmar | powered by shwecode.com